How'd it happen and more reports?: မိမိဘလော့ကိုဝင်ငွေ ဘယ်လိုရှာရသလဲ သင်တို့ သိကျပါသလား?
မိမိဘလော့ကိုဝင်ငွေ ဘယ်လိုရှာရသလဲ သင်တို့ သိကျပါသလား?
မိမိရဲ့ဘလော့ကို ၀င်ငွေ ဘယ်လောက်ရနေပြီလဲဆိုတာတော့ သိချင်ကျမှာပါ? Goolgle ကAdsense မှာ စမ်းစစ်လေ့လာကြည့်ဖူးကျပါသလား? ဗဟုသုတလေးပေါ့ဗျ.....
မိမိရေးသားတင်ပြထားသော ဘယ် စာပုဒ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်နိုင်ငံ၊ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လိုလူတွေက တရက်၊ တပတ်၊ တလ ဘယ်လောက် လူတွေဝင်ကြည့်ကျတာများပါသလဲ?
သတိထားမိတာကတော့ မိမိကုိုယ်တိုင်ရေးသားတင်ပြထားတာတွေကိုဘဲ လူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားကျများတာ ကိုတွေ့ရတယ်ဗျ၊ တဆင့်ကော်ပီကူးတင်တာကုို စိတ်ဝင်စားမှု သိပ်မတွေ့ကရသလောက်ပါဘဲ၊
နောက် မိမိ ဘလော့ ၄ခု ရဲ့ ၀င်ငွေ ဘယ်လောက်ရနေပါပြီလဲ သိချင်ကျမှာပါနော်! လွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး၊
သိတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ လူ ၁ထောင်လောက် ကျော်ငြာတွေကို ၀င်ကလက်နှိပ်မိမှ ၁ ဒေါ်လာဘဲရတာဆိုတော့ ဘာမှ တာ့ မရပါဘူး၊
အခုထိ ၀င်ကြည့်သူ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ကနေ ၂၀၁၅ခုနှစ် မတ်လထိ ၂၀၆,၀၀၂ ယောက် ရှိပြီး ကျော်ငြာတွေကို ၀င်ကလက်နှိပ်တဲ့သူ ၁,၅၇၈ ယောက်မှ page CRP ၀.၇၇%, CPC ဒေါ်လာဝ.၇၇, page RPM ဒေါ်လာ ၀.၅၅နှုန်းဘဲရတာ့ အခုထိ ဒေါ်လာ ၁၁၃.၃၁ လောက်ဘဲ ရဖူး သေးတယ် ဗျ....အားရစဘဲနော်...
အများဆုံးဝင်ကြည့်တဲ့ ၀လ်ဆိုဒ်ကတော့ Myanmarin sungapore ဖြစ်နေတယ်...
ထူးထူးခြားရေးသားထားတဲ့ Sexual လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုလူတွေပိုစိတ်ဝင်စားနေကျပါလား?
အမိမြေ မြန်မာပြည်ကဘဲ ၀င်ရောက်တာများတယ်ဗျ... အံ့သြစရာ ဒုတိယက အမေရိကန်လိုက်နေတယ်၊ တတိယက စကာင်္ကူပါဘဲ...
AdSense က တနေတာ ၀င်ငွေလေးပါ...
ဒါက AdSense ads click,CTP, eCPM ကနေ ၀င်ငွေရတာလေ...
မိမိ ဘလော့ရဲ့ ကျန်းမာရေးလေးစစ်ကြည့်လိုပ်အုံးမယ်